Halloween ee Baraasiil: maalinta saaxirad | Safarka Absolut
Halloween ee Brazil: maalinta Witches
Dhaqankii Halloween, kaas oo loo dabbaaldego habeenka Oktoobar 31, wuxuu si qoto dheer ugu xididaysan yahay qaar ka mid ah waddammada Anglo-Saxon sida Mareykanka, Ireland, Boqortooyada Ingiriiska o Kanada. Laakiin runtu waxay tahay in maanta habeenkan argagaxa leh looga dabaaldego ku dhowaad qof walba, sidoo kale gudaha Brasil, halka loo yaqaan Halloween (O Maalinta Bruxas).
Sida ka dhacday dalal kale oo badan oo leh dhaqan kaatoolig ah, xafladan la soo dhoofiyay ayaa si tartiib tartiib ah u beddelay dabaaldegyadii caadiga ahaa ee Dhamaan Maalinta Nafta Nofeembar 1. Brazil sidoo kale kama aysan reebin. Isaga xaaladdiisa, waxa jiray laba cunsur oo aasaasi ah oo horseeday ballaadhinta "Halloween Halloween" labaatankii sano ee la soo dhaafay: hal dhinac, faafinta xafladan oo ay ku faafiyaan iskuulada luqadaha ee qeybaha kala duwan ee dalka; iyo dhanka kale, ciidaha farxadda iyo farxadda leh ee reer Brazil, marwalba diyaar u ah inay u soo baxaan qoob-ka-ciyaarka oo ay waqti fiican helaan sabab kasta ha noqotee.
1 Asalka xisbiga Halloween
2 Sidee looga xusaa Maalinta Sixiroolayaasha Brazil?
3 Maalinta Saci, Halloween-ka reer Brazil
Asalka xisbiga Halloween
Ka hor intaadan u sharxin waxyaabaha gaarka ah ee Halloween ama Halloween ee qaabka Brazil, waxaa habboon in la xusuusto waxa asalka xisbigan iyo maxaa soo kordhay ilaa maanta.
Waa inaad dib ugu noqotaa wax kabadan laba kun oo sano waqtiga. Ku dadka celtic oo daganaa qaarada yurub ayaa u dabaal degi jiray xaflad la yiraahdo Samhain, Nooc u gaar ah ilaaha dadka dhintay. Waxaa la rumeysan yahay in xafladan jaahilka ah ay socotey dhowr maalmood (had iyo jeer qiyaastii Oktoobar 31), had iyo jeer ka dib marka goosashada la dhammeeyo.
Sida laga soo xigtay taariikhyahanno, faafitaanka diinta kiristaanka ayaa tirtiray raadadkii Samhain ee qaaraddii hore, in kasta oo dhaqanku ka badbaaday meelo gaar ah oo Romaaniyadu ka yartahay sida Islaantii Ingiriiska. Isku dayga ah in la waafajiyo dabaaldegyadan kalandarka Masiixiyiinta, Kaniisaddu waxay dooratay qarnigii XNUMXaad inay beddesho taariikhda dabaaldegga All Saints Day. Sidaa awgeed, dabaaldeggan wuxuu ka soo bilaabmay dabaaldeggii 13-kii Maajo illaa 1dii Noofambar, oo lagu daboolay Samhain.
Ereyga Halloween wuxuu ka yimid luuqadihii hore ee Jarmalka. Waa isku darka ereyada "quduus" iyo "habeen".
Astaanteeda ugu caansan waa bocorka, kaas oo la faaruqiyey loona qurxiyey in shumac laga dhex shido gudaha. Dhaqan ahaan, iftiinkan ayaa loo bartay iftiimi jidka dadka dhintay. Tani waxay ka soo baxday halyeeygii hore ee Irish ee Jack o'lantern, nin aan naftiisa laga aqbalayn jannada iyo naarta midkood geeridiisa kadib. Sidaa darteed, habeenki Samhain wuxuu umuuqday mid warwareegaya bilaa ujeedo isagoo shumaca gacanta ku wata.
Sidee looga xusaa Maalinta Sixiroolayaasha Brazil?
Sababtoo ah saamaynta dhaqan ee filimka iyo telefishankaHalloween wuxuu gumeystay qayb ballaaran oo meeraha ka baxsan aagga Anglo-Saxon. Waxaa jira caruur fara badan oo ka kala timi meelo kala duwan oo dunida ah kuwaas oo habeenkaa labbista oo kolba guri u gala iyagoo qaylinaya "Dhagar ama Daweyn" (trick ama daaweyn Ingiriisiga) ururinta macmacaanka iyo nac-naca.
Caadadan carruurtu ku dhex wareegaan xaafadda kuma badna dalka Brazil, halkaas oo Halloween ay ku nooshahay maalin ka badan xafladaha mawduuca dadka waaweyn iyo carruurta.
Mawduuca ugu weyn ee xisbiyadan waa argagax iyo adduunyo sarraysa. Dadku waxay u labistaan ​​sidii saaxirad, qalfoof, vampires ama zombies. Muhiimad gaar ah ayaa la saaraa qurxinta, mararka qaarkood xad-dhaaf ah. Ujeedadu waa in la helo muuqaalka ugu cabsida badan ee suurtogalka ah.
Midabada madow, oranjiga iyo guduudka ayaa door muhiim ah ka ciyaara qurxinta xafladaha Halloween. Dabcan, astaamaha tilmaamaya dabaaldega si wanaagsan loo wada garanayo yaan la waayin: bocorka caanka ah ee wejiyada sharka lagu sawiray, saaxiradyada, fiidmeerta, xuubka caaro, cirfiidyada, dhakada, bisadaha madow ...
Maalinta Saci, Halloween-ka reer Brazil
Wadamo badan balaadhinta aan la joojin karin ee Halloween waxay khatar ku keentay jidadkii hore. Dalka Baraasiil, oo ah dal leh dhaqan dheer oo kaatoolig ah, waxaa jira dad badan oo, markay arkeen indhahoodu aan fiicnayn, go'aansaday inay "la dagaallamaan".
Dia do Saci, waa beddelka loogu dabaaldegayo Halloween-ka Brazil
Sidaa darteed, sanadkii 2003, ayaa la ansixiyay Mashruuca Sharciga Federaalka ee tirsigiisu yahay 2.762, kaasoo aasaasay xuska Maalinta Saci Oktoobar 31st. Fikradda ayaa ahayd in si uun looga hortago guusha Halloween iyadoo la adeegsanayo shax astaan ​​u ah hiddaha reer Brazil: Saci.
Sida laga soo xigtay halyeeyga, Saci-pererê Waa wiil madaw oo xariif ah oo had iyo jeer gashanaya koofiyad cas. Astaamaha jidh ahaaneed ee ugu weyni waa inuu seego lug, cillad aan ka hor istaageynin inuu sameeyo nooc kasta oo kaftan iyo xumaan ah.
Beddel ahaan Halloween iyo Halloween, hay'adaha reer Brazil waxay dhiirrigeliyaan dhammaan noocyada waxqabadyada la xiriira shaxdan caanka ah. Iyadoo ay taasi jirto, weli waxaa jira dad yar oo reer Brazil ah oo u dabaaldega Maalinta Saci.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Halloween ee Brazil: maalinta Witches
The Beaver, xayawaanka qaranka Kanada
Caadooyinka dumarka Shiinaha